डा केयूर गौतम, अध्यक्ष सम्यक डायग्नोस्टिक
साउन १९, २०७५| प्रकाशित १३:२२
मानिसको दैनिक क्रियाकलाप, उसमा भएका शरीरका अन्य रोग तथा समस्या, समय, तनाव तथा ल्याबकै अवस्थाका कारण पनि रिपोर्टमा फरकपन आउन सक्छ । यसको समाधानको उपाय भनेको गुणस्तरीय चिन्ह प्राप्त र दक्ष जनशक्ति भएको प्रयोगशालामा जाँच गर्नु नै हो । यस्ता प्रयोगशालाले जाँचका लागि आएका व्यक्तिको विगतको ‘हिस्ट्री’का विषयमा जानकारी लिएर जाँच गर्छन । बिरामीलाई उपयुक्त परामर्श समेत दिन्छन् । सरकारले पनि प्रयोगशालाको गुणस्तर र जनशक्तिका विषयमा जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुगमन गर्ने निकाय बलियो नभएसम्म ल्याबको रिपोर्टमा निकै ठूलो अन्तर आउने समस्या दोहोरिरहन्छ।
चिकित्सकले अध्ययन गर्ने किताबहरुमा थाइराइडको परीक्षण जुनसुकै समयमा गर्दा हुन्छ भन्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ । व्यावहारिक रुपमा हेर्दा बिहानको समयमा परीक्षण गर्नु सबैभन्दा राम्रो पाइएको छ। बिहान, दिउँसो, साँझ र राति परीक्षण गर्दा रिपोर्टमा तलमाथि हुने समस्या हुन्छ ।
त्यसकारण थाइराइडको परीक्षणलाई हामीले बिहान गर्न सुरु गरेका छौँ । एकपटक हामीकहाँ एक जनाको दिउँसो थाइराइड परीक्षण गरिएको थियो । परीक्षणका क्रममा थाइराइडको सामान्य मात्रा भन्दा तीन गुणा बढी देखियो । दुई दिनपछि पुनः बिहान गर्दा रिपोर्ट सामान्य नै छ । पछि हामीले उनको विषयमा थप बुझ्दा दुई दिनअघि जाँच गराउन आउँदा उनको माइग्रेनले टाउको असाध्यै दुखेको रहेछ । माइग्रेनकै कारण उनको थाइराइडको मात्रा तीन गुणासम्म बढी भएको रहेछ । अरु लक्षण नदेखिएका कारण उनलाई पुनः परीक्षण गर्न भनिएको थियो । फलस्वरुप पछिल्लो परीक्षणमा उनमा थाइराइडको समस्या देखिएन।
यस्तै २२ वर्षकी एक युवतीको परीक्षणका क्रममा उनको रिपोर्टमा थाइराइडको समस्या देखियो । तर, उनलाई पनि कुनै लक्षण देखिएको थिएन । उनको रिपोर्ट अनुसार केही लक्षण देखा परिसकेको हुनुपथ्र्यो यसकारण हामीले उनको पनि पुनः परीक्षण गर्ने निर्णय लियौँ । पछिल्लो परीक्षणमा उनको रिपोर्ट पनि सामान्य आयो । हामीले उनको विषयमा पनि थप जानकारी माग्यौँ । अघिल्लो पटक जचाउन आउँदा उनी तीन चार दिनदेखि राति राम्रोसँग सुतेकी नै रहिनछन् । परीक्षाका कारण रातभरि पढ्ने र ननिदाउँदा बढेको मानसिक तनावका कारण उनको थाइराइड ह्वात्तै बढेको रहेछ । तर, दुई तीन दिनपछि गरिएको परीक्षणमा उनको रिपोर्ट सामान्य आयो।
K thyrodko kranle pregnant nahune samasya dekha parxa?? yesle k kasta aarharu garxan sarirma..plz vanidinus
मेरो श्रीमतालाई पनि थाईराइट भयो भनेर डक्टरको सल्ला अनुसार दबाई खुवाएको छु तर बिसेक भने भाको छैन झन झन ओजन बढ्दै छ के दबाइले काम नगरेरै होत?
थाईराइड राेगिले कस्ता कस्ता खानेकुरा खादा लाभदायक हुन्छ..??
के थाईराईड भयो भने जिन्दगी भरि नै औषधी खान पर्छ त?
ल्याब कहा छ।मेरो आमा लाइ पनि यो समस्या छ।येक चोटि अाेेेषधि चलाये पछि छोड्न मिल्छ कि मिल्दैन??